खुल्लामञ्चमा गरिबले खाँदा सरकारलाई लाज ! - Kohalpur Trends
२० कात्तिक, काठमाडौं । ‘मागीखाने र अल्छीहरुको शहर बनाएर बेइज्जत गर्न खोजेको’ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबारदेखि खुल्लामञ्चमा खाना खुवाउने काम बन्द गर्ने निर्देशन दियो । खाना खुवाउनेस्थलमा सुरक्षाकर्मी खटाइयो ।
अझै नि मानवता ढल्या छैन है…
‘यो अवधिमा १५ सुत्केरी र अपांग तथा विपन्न गरी ४० परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएँ । महानगरको सडकमा खानन खुवाउन नपाइने निर्णयले एकदमै नराम्रो लागेको छ’ गीता भन्छिन्, ‘कि उनीहरुलाई खान दिनुप¥यो, कि रोजगारी दिनुप¥यो । नत्र उनीहरु कसरी बाँच्छन् ? त्यस्तो अवस्था हेरेर कसरी बस्न सक्छ हाम्रो सरकार ?’
Previous Previous post: गठबन्धनको जवाफमा जबज
Next Next post: श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दबाब, तत्काल डेढ लाखको माग आउने दाबी